ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: အသက်ရှည်ချင်လျှင်အရင်ဖတ်ပါ။
ညချစ်သူ | 1:53 AM | ဟာသ
ညချစ်သူ | 1:53 AM |
တစ်ခါက ခွဲစိတ်ခန်းကနေ လူနာတစ်ယောက် ထွက်ပြေးလာတာကို
အမေ။ ။သားခွဲစိတ်လို့ မပြီးသေးဘဲနဲ့ ဘာလို့ ထွက်လာတာလဲ...
သား။ ။မကြောက်ပါနဲ့ ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်မှာပါလို့ ပြောလို့အမေရ
...အမေ။ ။သြော်သားကလည်း ဒါကအားပေးစကားလေ ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးစရာမလိုပါဘူး ...သားကြောက်မှာစိုးလို့ပြောတဲ့ဟာကို...
သား။ ။ကြောက်တာပေါ့အမေရ..သားကိုပြောတာမှ မဟုတ်တာ..သူနာပြုဆရာမက ဆရာဝန်လက်တုန်နေတာတွေ့လို့ ပြောတာအမေရ...
`ဆရာပြားတယ် ထင်ရင်လဲ ထားလိုက်ပါတော့ ဆရာ..ကျွန်တော် ဆရာနဲ့ ပြိုင်မငြင်းချင်ပါဘူး´
ခွေး၏သက်တမ်း ကို ၂၀-နှစ် ရှိစေဟု သတ်မှတ်လိုက်သည်။
ခွေး။ ။ ဖန်ဆင်းရှင်ခင်ဗျား။နှစ် ၂၀ တောင်ဆိုတော့ အချိန်အကြာကြီး “ဟောင်”နေရမှာပေါ့။ ၁၀-နှစ်ပဲ နေချင် ပါတယ်။ ပိုတဲ့ ၁၀-နှစ် ပြန်ယူပေးပါလား။
ထို့ နောက်မျောက်ကို ဖန်ဆင်းပြန်၏။
မျောက်၏ ဘ၀-သက်တမ်းကို နှစ် ၂၀-ဟု သတ်မှတ်ပေးလိုက် ပြန်သည်။
မျောက်။ ။ အောင်မယ်-လေးလေး။ နှစ် ၂၀-လုံးလုံး လူတွေကို ဖျော်ဖြေ နေရမယ်။
သွားဖြဲပြ နေရမယ်ဆိုတော့ ဘယ်ကောင်းတော့မလဲ။
ဖန်ဆင်းရှင် သဘောတူ လိုက်ပြန်သည်။
ထို့ နောက်နွားကို ဖန်ဆင်းပြန်၏။
နွား၏သက်တမ်းကို နှစ် ၆၀ ဟု သတ်မှတ်ပြန်ရာ နွားက သနားခံသည်။
နွား။ ။ ဖန်ဆင်းရှင်ခင်ဗျ။ နွားဆိုတာ လယ်ထွန်ရမယ်။
နေဒဏ် မိုးဒဏ် ခံရမယ်။
လယ်သမား မိသားစုအတွက် နို့ ထုတ်ပေးရမယ် ဆိုတာတွေကို လိုက်နာပါ့မယ်။
ဒါပေမယ့် နှစ် ၆၀-တောင် အဲဒီလိုကြီး လုပ်နေရမယ်ဆိုတော့ နွားတောင် မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူး။
နှစ် ၂၀-ပဲ နေပါရစေ။ ပိုတဲ့ နှစ် ၄၀- ပြန်နှုတ် ပေးပါ လားနော်။့ နော့်။
ဖန်ဆင်းရှင် သဘောတူလိုက်ပြီးနောက် လူကို ဖန်ဆင်းလိုက်သည်။
လူ့ သက်တမ်းက နှစ် ၂၀-ဟု သတ်မှတ်ပေးလိုက်သည်။
လူက ဆင်ခြေ တက်သည်။
လူ။ ။ ဖန်ဆင်းရှင် အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ လူအဖြစ်နှစ် ကျွန်တော် နှစ်-၂၀-နေရမယ်။
ဘ၀တလျှောက် အိပ်လိုက်။စားလိုက်၊ ကစားလိုက်လုပ်ရမယ်။
လက်ထပ်ရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားတာတွေကို ကျေနပ်ပါတယ်။ လိုက်နာပါ့မယ်။
ဒါပေမယ့် သက်တမ်း ၂၀-ဆိုတာ နည်းလွန်းပါတယ်ဗျာ။
ဖန်ဆင်းရှင် ပြန်နှုတ်ပေးထားတဲ့ နွားဆီက နှစ်၄၀၊ မျောက်ဆီက ၁၀-နှစ်နဲ့ ခွေးဆီက၁၀-နှစ်- စုစုပေါင်း နှစ်၆၀ - ကျွန်တော့်ကို ထပ်ဆောင်းပေး ပါလား။
ထို့ ကြောင့်လူသည် ပထမနှစ် ၂၀-တွင်စားခြင်း၊အိပ်ခြင်း၊ဆော့ခြင်း၊အပျော်ရှာခြင်းတို့သာ လုပ်၏။
ဒုတိယနှစ် ၄၀-တွင် နွားကဲ့သို့ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားရပြီး
တတိယ ၁၀-နှစ်တွင်မျောက်ကဲ့သို့မြေးများနှင့်ေ ဆာ့ရကာ နောက်ဆုံး ၁၀-နှစ်တွင် ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ လုပ်ရလေ့ရှိ၏။
ကဲ စပါပြီ…. ဟုတ်ကဲ့ အခုဆိုရင် Firefox က Google ကို စ ပေးတယ် ခင်ဗျ…. Google က Facebook ကို ထပ်ပေးပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ တက်တယ်ခင်ဗျကျတယ် ခင်ဗျ ပြန်တက်တယ်။ ပြန်ပြုတ်ကျတယ်။ ရတနာပုံက မခံပါဘူးခင်ဗျာပြန်ဖြတ်ချတယ်ခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ADSL က နာမည် အပျက်မခံဘူးခင်ဗျ။ အခုအချိန်မှာဆိုရင် ပုဂံက စိတ်ညစ်လို့ မှိုင်နေတယ်ခင်ဗျ။ ဟော.. ပြောရင်နဲ့တက်လာပြန်ပါပြီခင်ဗျ။ရတနာပုံက ရာဇဝင်အရိုင်းမခံပါဘူးခင်ဗျာ.. ပြန်ဖြတ်ချပါတယ်။.. အခုဆိုရင် Connection ကြီးဟာ ပြောနေရင်းနဲ့ပြတ်ကျသွားပါပြီခင်ဗျား…. ရတနာပုံဘက် ပါသွားပြန်ပြီခင်ဗျ Facebook တက်တယ်။ User တွေက ဝိုင်းအားပေးတယ်ခင်ဗျရတနာပုံက ပြန်ဖြတ်ချတယ်။ Google တက်လာပြန်ပြီ… ဒိုင်လူကြီး ပုဂံက Network busy ပြပါတယ်ခင်ဗျ။ အသုံးကြမ်းလို့ ပါတဲ့… Gmail လေး က တက်ဖို့ ချောင်းနေတယ်ခင်ဗျ… Loading လေး ဆွဲပြေးသွားပြီ…… ပြည့်ခါနီးပါပြီခင်ဗျ… ဟုတ်ကဲ့ အပြည့်ရောက်ခါနီးမှာပဲ Connection က ပြန်ဖြတ်ချလို့တစ် နေပါတယ်ခင်ဗျ။ အားပေးနေတဲ့ User တွေဟာဆိုရင် အခုဆိုရင် သုံးရတာ ဆန့် တငံ့ငံ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ ရတနာပုံရဲ့အစွမ်းတွေပေါ့ခင်ဗျ… ပွဲကို ကြည့်ရတာ ရင်တဖိုဖိုနဲ့ဘယ်တော့ ပြန်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျ… ဟုတ်ကဲ့ပြောရင်းနဲ့Facebook လေး Signin ဝင်သွားပြီခင်ဗျ… Home Page လေး တက်နေရင်းတန်းလန်း တစ်ဝက်ပဲပေါ်သေးတယ် ငြိမ်သွားပါပြီခင်ဗျ… အောက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ Done ပါတဲ့… ဒါနဲ့User ကအငြိမ်မနေပဲ Refresh ပြန်လုပ်တယ်ခင်ဗျ… Network Timeout ပါတဲ့ဒိုင်လူကြီး ပုဂံက အလစ်ကို မပေးပါဘူးခင်ဗျ… ဟုတ်ကဲ့ User ကိုတိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့သွားပြောနေပါတယ်ခင်ဗျ… ဘာပြောတာပါလိမ့်…? ဟုတ်ကဲ့ User က ဒီဘက်ကိုပြန်ပြောတယ်ခင်ဗျ… ဒိုင်လူကြီးက ပြောပါတယ်တဲ့ “အဲလောက်နဲ့ တက်တက်မလာနဲ့ ” လို့ ပြောပါတယ်တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ အခုဆိုရင် User တွေနဲ့ ရတနာပုံနဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေ ဖြစ်တော့မယ်ခင်ဗျ… User တွေကလဲ တင်းတယ်ခင်ဗျ… ရတနာပုံကို အသေရရ အရှင်ရရ ပါတဲ့… ရတနာပုံက Complain တက်တယ်ခင်ဗျ. FTTH တွေတပ်နေလို့ ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ User က မယုံပါဘူးခင်ဗျာ.. ဟုတ်ကဲ့ အခုဆိုရင် ပွဲစနေတာ ၅ ရက်လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျ… ပွဲဟာဆိုရင် ပြီးဖို့နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ အထိ စောင့်ရမယ်သဘောရှိတယ်ခင်ဗျ… ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကြေငြာနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ကွင်းဘေးဒိုင် EPC က မီးဖြတ်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
တရားသူကြီးက တရားခံကို ခပ်တင်းတင်းကြည့်ရင်း မေးတယ်။
တရားသူကြီး။ ။“၉ခါ။ ဟုတ်လား။ ဒါဆိုရင် မင်းကိုငါ အကြီးလေးဆုံး ပြစ်ဒဏ်ပေးရလိမ့်မယ်။”
တရားခံ။ ။“အကြီးလေးဆုံး ပြစ်ဒဏ်။ ဟုတ်လား။ အမြဲလာနေကျ ဖောက်သည်ပဲ။
Discount လေးတော့ ပေးပါဦး။”
မြက်စားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။အဲဒါနဲ့ ရှေ့နေက သူ့ရဲ့ ဒရိုင်ဘာကို ကားရပ်ခိုင်းပါတယ်။
နောက်တော့ အပြင်ကို ထွက်ပြီး အဲဒီလူကို မေးပါတယ်။“မင်းဘာလို့ မြက်တွေ စားနေတာလဲ။”
“ကျွန်တော်က အရမ်းပဲ ဆင်းရဲပါတယ်။ ဘာကိုမှ စားဖို့ မတတ်နိုင်လို့ပါ။” လို့ အဲဒီလူက ဖြေပါတယ်။
အဲဒီလူက “ကျွန်တော့်မှာ မိန်းမနဲ့ ကလေး ၃ယောက်လည်း ရှိသေးတယ်။” လို့ ပြောတော့ ရှေ့နေက
သူတို့ကိုပါ ခေါ်ခဲ့ဖို့ ပြောပါတယ်။သူတို့ အားလုံးကားထဲကို ရောက်တော့ မြက်စားနေတဲ့လူက
“ကျွန်တော်တို့ကို အိမ်ခေါ်သွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားဟာ အလွန်ကြင်နာတတ်တဲ့သူပဲ။”
လို့ ရှေ့နေကို ပြောပါတယ်။ ရှေ့နေကတော့ “မင်းကြိုက်မှာ သေချာတယ်။ ငါ့အိမ်က မြက်ပင်တွေက
၁ ပေလောက်ရှည်တယ်” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
Posted by ညချစ်သူ at 1:53 AM